June 8, 2021 - ApannPyay Media
ကူးစက်တတ်သောရောဂါများ ကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့ ဒန့်သလွန်ကို စားကြစို့
June 8, 2021 by ApannPyay Media
ကူးစက်တတ်သောရောဂါများ ကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့ ဒန့်သလွန်ကို စားကြစို့ အရွက် – အရွက်ကို ဟင်းချိုချက်သောက်လျင် သွေးကျသည်။ အမူးအမော် ပြေစေသည်။ အရွက်ကို ကြက်သွန်ဖြူ ငရုတ်ကောင်းနှင့်ဟင်းချို ချက်သောက်ပါက ရာသီထိန်တတ်သောအမျိုးသမီးများ ဓမ္မတာမှန်စေသည်။ အပူလွန်ကဲသော ရောဂါများကိုနိုင်သည်။ ကျောပူရင်ပူ လည်ချောင်းပူ နှုတ်ခမ်းပူစသော အပူလွန်ကဲခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေသည်။ အရွက်နုများကို ကြော်စားပါက ယားနာပျောက်သည်။ အရွက် သတ္တုရည်ကို နို့နှင့်ရောသောက်လျှင်ဆီးရွင်စေသည်။ အရွက်ကို ငါးကြင်း၊ ကြက်သွန်နီဖြင့် ကြော်စားလျှင် လေသက်စေသည်။ အရွက်ကို ပဒဲကော၊ ကြက်သွန်ဖြူ နှင့်ဟင်းချိုချက်သောက်ပါက ဓမ္မတာထိန်ခြင်းငုပ်ခြင်းကို သက်သာပျောက်ကင်းစေသည်။အပွင့် – ဒန့်သလွန်အပွင့်ကို ပုစွန်ခြောက်ဖြင့်သုပ်စားပါက အကြောဆိုင်းခြင်း၊ အကြောဆွဲခြင်း၊အကြောရမ်း၊ အကြောရောင်ခြင်းကို သက်သာပျောက်ကင်းစေသည်။ အပွင့်ကို ထောပတ်၊ကြက်ဥနှင့် ကြော်စားလျင် ခွန်အားတိုးစေသည်။ အပွင့်ကို ဆိတ်သားနှင့် ကြော်စားပါကလေမဖြတ်နိုင်ပါ။ … Read more
ဘယ်အချိန်၊ ဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက် မျက်နှာပေါင်းတင်ဖို့ အကောင်းဆုံး သစ်သီး (၇) မျိုး အသားအရေကို ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းမှုတွေပြုလုပ်ဖို့ လိုအပ်ရုံသာမက တစ်ခါတလေမှာ ပေါင်းတင်တာမျိုးလေးတွေပြုလုပ်ပြီး အားဖြည့်ပေးရပါတယ်။ ကြည်လင်ပြီး ပျိုမျစ်တဲ့ အသားအရေကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ချင်ရင် အိမ်မှာတင် ပြုလုပ်လို့ရနေပါပြီ။ ခရီးသွားတဲ့အခါတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပွဲတက်စရာရှိတဲ့အခါတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် Mask ဝယ်ဖို့ အချိန်မရခဲ့ရင် ဒီသစ်သီးလေးတွေက သင့်ကို ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ သဘာဝ ပစ္စည်းလေးတွေဖြစ်တာကြောင့် မတည့်မှာတွေကို ဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိသလို၊ ပုံမှန်လေးအသုံးပြုပေးခြင်းဖြင့် ကျန်းမာစိုပြည်တဲ့ အသားအရေလေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ (၁) သင်္ဘောသီး – သင်္ဘောသီးဟာ ဝက်ခြံကို တိုက်ထုတ်နိုင်တဲ့ ဗီတာမင်နဲ့သတ္တုဓာတ်တွေ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်။ ဗီတာမင် အေ၊ စီ၊ အီး၊ hydroxy acid, papain, နဲ့ potassium တို့ဟာ မွဲခြောက်ခြောက်ဖြစ်နေတဲ့အသားအရေနဲ့ အိုမင်းရင့်ရော်မှုတွေကို … Read more
အင်ဥကို ချက်စားတော့မယ်ဆိုရင် အရေးတစ်ကြီး သတိထားသင့်တဲ့ အချက်များ အင်ဥကို ဒညင်းသီး၊ ပီလောပီနံ၊ ကြောင်လျှာသီး၊ ကြက်ဟင်းခါးသီး၊ ဂဏန်း၊ ဖားသား၊ ဒူးရင်း သီး၊ မျှစ်ချဉ်၊ ပုဇွန်ချဉ်၊ ငါးဖယ်ချဉ်၊ ငါးလေးချဉ်၊ ဆူးပုတ်၊ ပဲငပိတို့နဲ့ လုံးဝတွဲဖက်၍ မစားသင့်ပါ။ စားမိပါက မသေပေမယ့် မူးဝေခြင်း၊ အော့အန်ခြင်း၊ ရင်ထဲမအီမသာဖြစ်ခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်းများ ခံစားရတတ်ပါသည်။ အင်ဥဟာ အစာအဆိပ်သင့်စေတဲ့ အစားအစာ ဖြစ်သောကြောင့် အင်ဥ ကြိုက် သူတွေ အတွက် တော့ သတိထား စားသုံးသင့်ပါတယ်။အင်ဥ စားသုံးခြင်းကို သွေးတိုးရောဂါရှိသူများ၊ နှလုံးရောဂါ ရှိသူများ၊ ခါးနာခါးကိုက် ဝေဒနာခံစားရသူများ၊ လေးဘက်နာသမားများ အင်ဥကို တတ်နိုင်သ လောက် ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။ အင္ဥကို ခ်က္စားေတာ့မယ္ဆိုရင္ အေရးတစ္ႀကီး သတိထားသင့္တဲ့ … Read more
ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ ဝေမျှထားတဲ့ ဂျင်းကိုဘာလို့စားသုံးသင့်လဲ
ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ ဝေမျှထားတဲ့ ဂျင်းကိုဘာလို့စားသုံးသင့်လဲ တွန့်လိမ်တွန့်လိမ်နဲ့ ကြည့်ရတာတစ်မျိုးလေးဖြစ်နေတဲ့ <ဂျင်းတွေကိုဂျင်းတေကိုယခင်မြင်တွေ့တုန်းက ဘယ်လိုသုံးရတယ်၊ ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိလဲ ဆိုတာကို မသိခဲ့ဖူးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့ ကိုယ်မသိခဲ့တဲ့ ဂျင်းကို ရှေးယခင်ကတည်းက ဆေးဖြစ်ဝါးဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့် ဂျင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုအချိန်၊ ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ ဘယ်လိုအသုံးဝင်သလဲဆိုတာကို သိရှိနိုင်စေဖို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။ ၁။ အသားအရေပျော့တွဲမှုကို တိုက်ဖျက်ခြင်း ဂျင်း Scrub လုပ်ပေးခြင်းက အသားအရေကိုအနွေးဓာတ်ပေးစွမ်းပြီး သွေးလည်ပတ်မှုအားကောင်းစေပါတယ်။ကြိတ်ပြီးသားဂျင်း လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်းကို ဂျင်းရည် ၀.၅ လီတာနဲ့ရောစပ်၍ ပင်လယ်ဆားခွက်တစ်ခွက်စာ ထည့်ပြီးရောမွှေပါ။ ထိုအရောကို Sponge သုံးပြီး အသားအရေပျော့တွဲနေတဲ့နေရာများကို ပွတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ၂။ ဇီဝဖြစ်စဉ်အားကောင်းစေပြီး မအီမသာဖြစ်ခြင်းကိုသက်သာစေခြင်း အစာမကြေတဲ့ပြဿနာတွေ၊ လှိုင်းမူးတတ်တာတွေ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် မအီမသာဖြစ်တာတွေကို ခံစားရတတ်ရင် ဂျင်းကိုဝါးနိုင်သလို လက်ဖက်ရည်ထဲကို ဂျင်းထည့်ပြီးတော့လည်း သောက်သုံးပေးနိုင်ပါတယ်။ … Read more
ပူပြင်းလှတဲ့ နွေရာသီမှာ အပူဒဏ်​ခံ ကို သက်​သာ​စေ​သော မြန်မာ့ရိုးရာနည်း
ပူပြင်းလှတဲ့ နွေရာသီမှာ အပူဒဏ်​ခံ ကို သက်​သာ​စေ​သော မြန်မာ့ရိုးရာနည်း ပူပြင်​းတဲ့ရာသီမှာအပူကိုသက်​သာ​ကောင်​းမွန်​​စေတာကကျွန်မတို့ နေ့စဉ်သောက်နေတဲ့“ရေနွေးကြမ်း” ပါဘဲ။ မနက်စောစောကတည်းက ရေနွေးကြမ််းကို ကျကျ လေးနှပ်၊ ပြီးရင် လုံးဝအေးသွားတဲ့အထိ အအေးခံထား။ နေ့လည်လောက်ဆို သောက်လို့ရပြီ။နေ့လည် အပူချိန်တက်နေတဲ့ အချိန်မှာ ရိုးရိုးရေမသောက်ဘဲ အဲဒီ ရေနွေးကြမ်းအအေးကိုသာ သောက်နေ။ တကယ် အပူဒဏ် ခံနိုင်တယ်။နောက်ထပ် အပူငြိမ်းစေတဲ့ အစားအစာတစ်ခုလည်း တင်ပြချင်ပါသေးတယ်။ အဲဒါ ကတော့ မြန်မာ့ရိုးရာ စားစရာ ထန်းလျှက်ပါ။ထန်းလျှက် ဟာ အခုလို ပူပြင်းတဲ့ ရာသီမှာ တကယ်စားသင့်တဲ့ အစာတစ်ခုပါ။ ထန်းလျှက်ဟာ ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ သက် စောင့်ဓာတ်ဖြစ်တဲ့ ဝမ်းမီးကို အလွန်မှန်စေပါတယ်။ ချိုတာခြင်း တူပေမယ့် သကြား၊ ကြံသကာ တွေနဲ့ မတူပါဘူး။ မှတ်​ချက်​ အပူဒဏ်ကြောင့်ချွေးများအရမ်းထွက်ပြီး … Read more
ပစ္စည်းဥစ္စာ သူရှာသော်လည်း ဇနီးဖြစ်သူဆွမ်းလောင်းလျှင် ခင်ပွန်းကုသိုလ် ရမရ ဇနီးဖြစ်သူဆွမ်းလောင်းလျှင် ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကုသိုလ်ထပ်တူရပါသလား? ” မရပါဘူး “အမျိုးသားတွေ အထူးသတိပြုစရာ ကောင်းတဲ့ အချက်ပါပဲလို့ စာမှာ ဆိုပါတယ်။ အချို့ကတော့ ယောင်္ကျားဖြစ်သူ ရှာထားတဲ့ ပစ္စည်းနဲ့ လှူဒါန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် မိန်းမလှူရင် ယောင်္ကျားလဲ ထပ်တူကုသိုလ်ရတယ်လို့ ထင်နေကြပါတယ်။ ပစ္စည်းကို ဘယ်သူရှာတယ် ဘယ်သူပိုင်တယ် ဆိုတာနဲ့ မဆိုင်ပါဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ သေလို့ သပိတ်သွတ်တဲ့အခါသေသူပိုင်တဲ့ ပစ္စည်းနဲ့လှူလို့ သေသူ ကုသိုလ်မရပါဘူး။ သာဓုခေါ်နိုင်တဲ့ ပြိတ္တာဘဝရောက်လို့သာဓုခေါ်နိုင်တဲ့ နေရာမှာရောက်နေလို့ သာဓုခေါ်ဆိုခွင့်ရမှသာ သာဓုခေါ်တဲ့ ပတ္တာနုမောဒန ကုသိုလ်သာရပြီးအကျိုးခံစားရတယ်လို့ စာမှာဆိုထားပါတယ်။ ဒါကိုကြည့်ရင် သူ့ပစ္စည်းကိုလှူလို့ သူကုသိုလ်ရတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အလှူခံပုဂ္ဂိုလ် ၊ လှူဖွယ်ပစ္စည်း ပေးလှူတဲ့စေတနာ ၊ ပေးလှူခြင်းဆိုတဲ့ ဒါနအင်္ဂါလေးပါးရှိပါတယ်။ … Read more
ထောပတ်သီး ပုံမှန်စားပေးခြင်းကြောင့်ရရှိလာမယ့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးများ
ထောပတ်သီး ပုံမှန်စားပေးခြင်းကြောင့်ရရှိလာမယ့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးများ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပေါပေါများများထွက်တဲ့ ထောပတ်သီးတွေက အလှအပရေးရာအတွက်ရော၊ ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ပါ အကျိုးဖြစ်စေတဲ့ အသီးတစ်မျိုးပါ။ ထောပတ်သီးကို ပုံမှန်နေ့တိုင်း စားပေးမယ်ဆိုရင်တော့ မယုံနိုင်လောက်အောင် ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေ ရှိလို့နေပါတယ်နော်။ ကဲ ထောပတ်သီးက ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေ ရှိနေလဲဆိုတာကို ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။ ပိုကျန်းမာလာမယ် ထောပတ်သီး ပုံမှန်စားပေးခြင်းက ပိုမိုကျန်းမာတဲ့ သူတစ်ယောက် ဖြစ်လာစေပါတယ်။ ထောပတ်သီးဟာ အဟာရပြည့်ဝတဲ့ အစားအစာတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး သူ့မှာ ပရိုတိန်း၊ အမျှင်ဓာတ်၊ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ကောင်းမွန်စေတဲ့ အဆီဓာတ်၊ သံဓာတ်နဲ့ zinc, phosphorous, vitamin C, maganesium, thiamin, vitamin E, vitamin K, folic acid, copper, B6 စတဲ့ များစွာသော … Read more
လူသိနည်းတဲ့ ငုံးဥရဲ့ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများ ငုံးဥ လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ တစ်ထောင်ဖိုး ၃ထုပ်နဲ့ လိုက်ရောင်းနေတဲ့ ကားဂိတ်က ချာတိတ်အချို့ကို ပြေးမြင်မိကြပါလိမ့်မယ်။ ငုံးဥကို မြန်မာပြည်မှာတော့ သရေစာ အနေနဲ့သာ စားကြတာ များပြီး အခြားဟင်းတစ်ခုခုမှာ ထည့်တဲ့ ဖြည့်စွက်စာ အနေနဲ့ ထည့်ပြီး စားကြတာများပါတယ်။ ဟင်းအနေနဲ့ ချက်စားကြတာ နည်းပါတယ်။ ငုံးဥကို မသိသူ ရှားပေမယ့် သူ့ရဲ့ အာဟာရသတ္တိတွေ အကြောင်းတော့ သိသူ နည်းပါလိမ့်မယ်။ ငုံးဥ မှာ ပါဝင်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေဟာ ကြက်ဥနှစ်လုံးစာနဲ့ ညီမျှတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ငုံးဥမှာ ပရိုတင်း၊ ကောင်းမွန်တဲ့ အဆီဓာတ်၊ သံဓာတ်၊ ဗီတာမင်အေ၊ ဗီတာမင်B1,B2၊ ကယ်လ်ဆီယမ်၊ မီးစုန်းဓာတ်၊ ဆိုဒီယမ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ သတ္တုဓာတ်တွေ … Read more
တစ်ညလုံး ပန်ကာဖွင့်အိပ်ပြီး အိပ်စက်ခြင်းဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် ဆိုးကျိုးဖြစ်စေ ရာသီဥတုပူပြင်းလာတာနဲ့အမျှ သာမန်လူတန်းစားတွေအဖို့ ပန်ကာတွေဟာ အသုံးတည့်လာပါတယ်။ ညဘက်တွေမှာ အပူဒဏ်သက်သာစွာနဲ့ အိပ်ပျော်အောင်လို့ဆိုပြီး ပန်ကာတွေကို ဖွင့်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ညဘက်မှာ ပန်ကာဖွင့်ပြီး အိပ်တာဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် ဆိုးကျိုးအများကြီး ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ပန်ကာလေဟာ အခန်းတွင်းမှာပဲ လှည့်ပတ်ပြီး တိုက်နေတာကြောင့် ဖုန့်မှုန့်တွေဟာ နှာခေါင်းထဲကနေတဆင့် ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရင်ကြပ်ပန်းနာသည်တွေနဲ့ အလာဂျီဖြစ်တဲ့သူတွေဟာ ပန်ကာနဲ့ လုံးဝမတည့်ပါဘူး။ တဖန် ပန်ကာတွေဟာ လေအေးတွေ ပြန်လည်မှုတ်ထုတ်ပေးရတာကြောင့် အချိန်ကြာလာတဲ့အခါ အသားအရည် ခြောက်သွေ့မှုကို ဖြစ်ပွားစေပါတယ်။ တကယ်လို့ မျက်လုံးကို တစ်ဝက်တစ်ဝက်ဖွင့်ပြီး အိပ်ပျော်သွားရင်တောင် ပန်ကာလေကြောင့် မျက်လုံးဟာ ခြောက်သွေ့ယားယံလာနိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ နှာခေါင်းပေါက်နဲ့ ဆက်သွယ်ထားတဲ့ ဦးခေါင်းခွံတွင်းမှာရှိတဲ့ လေလမ်းကြောင်းဟာ ကျိန်းစပ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် … Read more
ခေါင်းစည်းကြိုးကို လက်မှာပတ်ထားတတ်တဲ့ မိန်းကလေးတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ ဆိုးကျိုး(၃)ချက်
ခေါင်းစည်းကြိုးကို လက်မှာပတ်ထားတတ်တဲ့ မိန်းကလေးတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ ဆိုးကျိုး(၃)ချက် ခေါင်းစည်းကြိုးတွေကိုလက်မှာဝတ်တတ်တဲ့အကျင့်ရှိတာက သင့်ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေလိမ့်မယ်လို့ တွေးဖူးပါသလား။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ထိခိုက်စေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မိန်းကလေးအများစုက ခေါင်းစည်းကြိုးတွေကိုလက်မှာစွပ်ထားတာကို ဖက်ရှင်တစ်မျိုးလို လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒါဟာ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့…. ၁။ သွေးလှည့်ပတ်မှုကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတယ် ခေါင်းစည်းကြိုးကလက်မှာအနည်းငယ်ကြပ်နေရုံနဲ့ဘာမှမဖြစ်လောက်ဘူးဆိုပြီး ဝတ်မထားပါနဲ့။ နည်းနည်းလေးပဲ ကြပ်နေတာက အချိန်ကြာလာတဲ့အခါ သေးငယ်တဲ့ သွေးကြောလေးတွေကို ပိတ်ဆို့စေပြီး သွေးလှည့်ပတ်မှု နှေးကွေးတာကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ၂။ ရေရှည်ထိခိုက်မှု ဖြစ်စေတယ် ခေါင်းစည်းကြိုးရဲ့တင်းအားကြောင့် သွေးလှည့်ပတ်မှုကို ထိခိုက်စေတဲ့အပြင် ခေါင်းစည်းကြိုးရဲ့မျှော့ကြိုးကနေ ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေ အရေပြားပေါ်ကိုရောက်လာပြီး အရေပြားရောဂါတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ နေ့တိုင်းလိုလို ခေါင်းစည်းကြိုးကိုလက်မှာဝတ်ထားမိရင် အရေပြားအတွက် ပိုဆိုးနိုင်ပါတယ်။ ၃။ အလှပျက်စေတယ် ခေါင်းစည်းကြိုးကိုလက်မှာပတ်ထားတတ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေက ဒီလိုပတ်ထားတာဟာ ဖက်ရှင်တစ်ခုဖြစ်တယ်၊ အထာကျတယ်လို့ထင်တန်ကြပါတယ်။ တကယ်တမ်းမှာတော့ … Read more